Unomdla, ungenakuqikelela kwaye ungakhathali, uqonda naziphi na izikhokelo zakho kunye nomnqweno ngokusebenzisa isenzo ... Akayena "ngaphambili" kuphela, kodwa "nangethuba" kwaye, ngokungafunekiyo, "emva kokuba" ngesondo. Wena, emehlweni akhe, unyanqweneleka kwaye unhle kwaye ngaphandle kwakho akukho nakwabanye abasetyhini emhlabeni wonke, kodwa ukuba uthini ukukhanya, kwiLizwe lonke. Ungumntu wendalo yonke into enhle engaziwayo kwaye uyakuthanda sonke ukusuka ekupheleni kweenwele kunye neenzwane. Ukubukeka kwakhe kudlala kwaye kuyakuthanda, kukukhumbuza yonke into kwaye uphelele kwihlabathi lokuthanda nokuthanda. Uyaziqhekeza ebhedeni kwaye akayi kukuvumela ukuba ulale kuze kube kusasa, ngegama, isondo kunye nomntu onjalo ungenakulibaleka kwaye ungenakuthelekiswa. Kwaye konke malunga nomntu ogama lakhe lingabhinqa ngokukhuselekileyo isimo somthandi obalaseleyo. Kodwa indlela yokwenza umthandi opheleleyo kumntu, ngoku nje sizama ukufumana.
Ngelishwa, uhlobo lolo mntu ebomini bethu alufanekanga, kodwa ukuba udibene naye, yigcine kwaye ungavumeli ukuba uhambe. Ngoko ungayibona njani indoda efanelekileyo kwisihlwele? Ukumelana nesimo sengqondo sokubonakala kwendoda enomthandi obalaseleyo, kuyinkcubeko yokwahlula loo mpawu njengomzimba omhle wezemidlalo, amahlombe amaninzi kunye nemisipha yangemva, izandla ezintle kunye neminwe ende kwaye enomzimba kwaye, ngokugqithiseleyo, impumlo ende. Ngulo mfanekiso, ngokwemantombazana namabhinqa amaninzi, abafihla emva kobukeka babo umfanekiso womntu onothando kunye onomdla. Kodwa, ukuba uqiniseke ngeepesenti ezilikhulu ukuba lo mfanekiso uza kuzigweba kwaye, ukuba uzama ukubonakala okunjalo, uya kufumana umntu oqaqambileyo embhedeni olingana ne "ikati kwisaka". Kufuneka ihlale ikhunjulwa ukuba ukubonakala kuyakhohlisa, kwaye ngezinye izihlandlo zilahla zona. Kule meko, loo nto ayiyi kuphinda idideke kwaye ayiyi kulahlekelwa ithemba lokuba amadoda anjalo, okokuqala, musa ukujonga umbala omhle, kodwa phawula umntu oqhelekileyo. Khumbula ukuba iCasanova enomdla kunye nexesha elithile uDon Juan, uhlala kuwo wonke umntu, kungekhona nantlalontle eyakha indoda. Nantsi into ephambili kukuba unako ukuvusa le mpawu kuyo kwaye kuphela ke unokwenza "umatshini wesini" ngokwenene kumntu. Ngoko, njani ukwenza amadoda afanelekileyo avela kumadoda, ngoko uzalise ubomi bakho ngothando nangothando?
Okokuqala, khumbula ukuba ukuze wenze inkwenkwe yakho enhle yinkwenkwe elele, kufuneka, okokuqala, ukuba utshintshe ngokwakho kunye ngqo nomntu wakho kunye nobomi bakho obusondeleyo. Ukuba uqala ukufundisa kwakhona ngaphandle kokuguqula ngokwakho, unokuguqula ukuba angakuqondi kwaye ngokukhawuleza, kunokuba kunzima, kunikezela inxalenye.
Ngoko, isinyathelo sokuqala kwenguqu yendoda ibe ngumthandi ofanelekileyo, kufuneka kube yinguqulelo yakho. Zama ukubheka ubomi bakho bobulili kunye nawe ngokwamehlo, zenzele izinto ezintsha kunye nokuphucula ukuphucula ubuhlobo bakho. Ngendlela, musa ukulibala kule nqanaba ukukhawulelana nemvakalelo enokuzikhethela kwinqununu yakho.
Isigaba sesibini sifanele sibe nguhlalutyo lwakho lwentlalo yonke kunye naye. Zama ukukhumbula ezo zihlandlo xa zonke ziqale kwaye wena, njengabantwana besikolo, utshiswe ngothando, okukukhawuleza ukuba unomdla kunye nesondo. Khangela oko kwenzekayo ngoku - ungubani, kwaye ungubani. Cinga ngako, kodwa ngaba unalo nawuphi na umhlobo nomfanekiso wowesifazane ofanelekileyo ebhedeni. Emva koko, ukuba ufuna umntu ukuba abe yintoni ongayiyo, oku akuyi kuzisa umphumo omuhle. Ngoko ke, kufuneka uqonde ngokucacileyo iimpazamo zakho kunye neeplctures kwaye ngoko uqinisekise ukuba wena, kungekhona isoka lakho, ungabavumeli.
Emva koko, sele sele usesiteji sesithathu, zama ukujika kwiyona nto engeyona inkosikazi enhle, ubeke indoda yakhe ngothando kunye nesisa. Ngamaxesha amaninzi kunokwenzeka, zama ukumncoma, umenze ayanconywa aze athethe ngendlela ayenzayo ngayo. Oku kuya kumchukumisa ukuba athathe isinyathelo sokubuyela kuwe ukuze ahlangane kwaye aphendule ngohlobo.
Isigaba sesine sitsho ukuba kufuneka udibelele kwi-pool of passion. Yiba nesondo, ngexesha ngalinye ukuthetha nomthandekayo ngolwimi lomdla kunye nomzimba. Musa ukucinga malunga neengxaki, ukuthintela kunye neengcamango. Oku, kunene, kuya kunceda umntu obathandayo ukuba azive "kwinqanaba lakhe" kwaye abe negalelo ekukhutsheni inzondo kunye nesondo. Emva kwakho konke, ngothando, into ebaluleke kakhulu kukunxibelelana kwemizimba, kwaye kungekhona ixesha elide kunye neentetho ezinomdla ngothando. Unomdla, unxibe kunye nokumanga onokuthetha okungaphezu kwamagama apho.
Isigaba sesithandathu endleleni eya ebomini obuhle bobulili kunye nomlingo okhangelekileyo, uza njengomxhasi wesine. Yeka ukuzilawula ngexesha lolwalamano lwakho naye. Ulibale ngehlazo nokuqina, ukuba ufuna ukukhala, yenza ngokukhawuleza njengoko kunokwenzeka. Yazi, olu hlobo lendlela yokuziphatha luya kumkhokelela ngakumbi kwaye luvusa "inzondo".
Kwaye ekugqibeleni, isigaba sokugqibela sesithandathu. Isiseko salo sisekufuneka ukuba, ngokuphindaphindiweyo kunokwenzeka, unikeze umhlobo wakho ukuba abe nesondo. Kwaye, ngendlela, kungekhona nje ngesondo, kodwa ngesondo kunye neendidi zemidlalo yokudlala indima, engazange iqhutywe ngeengcamango ezingenanto kunye nokunye. Konke oku kuya kubonakala kwisigxina sakhe esinqwenelekayo sesini, ngoko ukuphosa iimpanuko zakhe kunye neengcamango zakhe. Apha, loo ndoda iya kusebenza ngokupheleleyo kwizinga elingenalwazi, eliza kubandakanya umsebenzi wakhe wesondo uphindwe kabini. Khumbula ukuba ngocansi, njengokubugcisa, into ephambili yendalo kunye nomnqweno wokuzama. Faka le miba emibini ebomini bakho bobulili, kwaye uya kubona ukuba oku kuya kuchaphazela njani umphefumlo wakho womtshato, ukumnika i-sexual stimulus yokwenza ihlabathi elalilini lakho.
Kwaye, ekugqibeleni, khumbula ukwenza umthandi, kodwa ngamanye amazwi, uCasanova ovela kumnandi wakhe akaze afune ukulala naye, ngaloo ndlela ugxeke ukuziphatha kwakhe ebhedini. Musa ukumgxeka ngenxa yokungakwazi ukuphumla naye kunye nokuzonwabisa. Ungamvumeli umnqweno wakhe wobudlelwane bezesondo kunye nawe kunye nalo lonke uthando lwakhe, phenduleni. Ukuba uzalisekisa yonke le mithetho, ngokuqinisekileyo uya kufumana iHercules epheleleyo kakhulu engapheliyo, eyona njongo ephambili iya kuba kukukholisa. Inhlanhla!
Malunga namazwe akude malunga nolwandle oluluhlaza malunga namahle amahle
Yoga nge posture
Intlanzi kunye nemifuno ebhakabhaka
Izipho zoNyaka omtsha kubantwana esikolweni nasezikolweni. Yintoni enokuyinika intombazana nentombazana, yintoni isipho esithakazelisayo nesingavamile sokukhetha uNyaka omtsha 2017
I-Alimony yokugcinwa komfazi
Banana Cupcakes ngeNuts